INDLELA YOKOYISA UMDLALO KAKHULU
Kwinqaku lanamhlanje siza kukwazisa kuwo onke la maqhinga okukhohlisa ekufuneka uwazi ukuze woyise inkwenkwe enomhlaza, ungaphoswa, unokuyiba intliziyo yakhe kwaye uphele wonwabile nawe.
1 Ungawunqoba njani umhlaza
2 Iindlela zokoyisa umhlaza
3 Iingcebiso ngemisebenzi kunye nezipho
4 Iimpawu zomhlaza kufuneka zihlale zizama ukuba kubudlelwane kunye
Ungawunqoba njani umhlaza
Ngexesha elithile sonke sasikuloo ndawo apho umntu wasithathela ingqalelo, kwaye saqala ukuphanda kancinci malunga naye kwaye safumana uphawu lwe-zodiac, sakhawuleza sakhangela i-intanethi ukuhambelana nayo, ngaloo ndlela ukwazi ukuba iinkwenkwezi kwicala lethu kwaye ukuba ubudlelwane bexesha elizayo buza kusebenza.
Sifikelela kwelo nqanaba kwaye siyaqonda ukuba umhlaza luphawu olunezinto ezininzi ezothusayo, okokuqala, kufuneka sazi ukuba bahlala bengabantu abangazilawuliyo iimvakalelo zabo kakuhle, ke lumkele oko ukuze uphephe ukwenzakala. Bahlala benomdla kakhulu, bazincama ngenxa yabanye abantu, bazikhusele ngokugqithisileyo, banothando, baqhelene kakhulu kwaye banecala elimnyama eligcwele ingqumbo.
Kodwa musa ukudimazeka ukuba ugqatso lokoyisa indoda eyiCancer, kunokwenzeka kwaye xa bethandana bahlala bengabantu abazinikeleyo nabanyanisekileyo, ke makhe sijonge la maqhinga alandelayo okuloba ukoyisa inkwenkwe yakho yamaphupha.
Iindlela zokoyisa umhlaza
Okokuqala, thatha ixesha lokumamela kwaye umazi kancinci, kuba bathanda ukuba ngabantu abanzima kwaye baphikise, kokubini ngamazwi abo nangezenzo zabo, ke musa ukuphelelwa ngumonde, kwaye ufunde uyazigcina ezo nkcukacha, ukuze kamva zingakothusi.
Soloko unyanisekile kumhlaza, yenye yeempawu ezixabisa ukunyaniseka, kunye nokunika iingcebiso, bayakuthanda ukuba umamele izimvo zabo kwaye ubamamele.
Bahlala banika kubaluleke kakhulu kubomi babo kubahlobo babo, ke musani ukuzama ukuzixakekisa kunye nokuncinci kakhulu ukuzama ukubatyhalela kude, kunokwenzeka ukuba bazakusuka kuwe kuqala ngaphambi kokuba yenzeke.
Yiba nomonde kwiimoods zakhe, njengoko enokuba nokutshintsha kwemo ngesiquphe nangokubi. Kungenxa yokuba bathambekele ekubeni ngabantu abadlamkileyo, ke siyakucebisa ukuba xa ungazimiseleyo nabo, hlala kude, akukho nto ibacaphukisayo kunamanyathelo obuxoki.
Mbonise uthando kunye nokuqwalaselwa, ngaloo ndlela uya kuba nakho ukungena entliziyweni yakhe yelitye kwaye mhlawumbi ungaze uphinde uhambe.
Sukulinga ukumphikisa, bayakukhusela inqaku labo kude kube sekupheleni kwaye uya kuphulukana nengxoxo, enye into esingayikhuthaziyo kukubaxelela ukuba mabenze ntoni, ngabantu abacace gca ngeenjongo zabo, iyabakhathaza into yokuba phinda izinto.
Bacacisa kakhulu, ubuso babo buza kuyithetha yonke loo nto, cwangcisa ii-alamu zakho kwaye ubone ukuba ngaba ulwimi lomzimba wabo lukuxelela ukuba kukho umdla, ungothuka yinto onokuyifumana ngokufunda ukwahlula izijekulo zabo.
Bangabantu abaqhelekileyo, ikhaya labo lidla ngokuba liziko lobomi babo, ke sukuzama ukubasusa kuloo nto, ngabo abakhetha ukuhlala ekhaya ngeCawa bebukele iNetflix, endaweni yokuya ezivenkileni okanye elunxwemeni, unetyala qonda, ngaphambi kokuzama ukumkhupha esihlalweni sakhe.
Olunye lweempawu zabo ezintle ngamandla abo, nangona bengqina ukuba ngabantu abanolwazelelelo, ecaleni komhlaza awusoze uzive ungakhuselekanga.
Khumbula ukuba xa uMhlaza uthandana, uzama ngokuzenzekelayo ukukhusela abanye abantu, indalo kukukhusela kunye nokuthintela nantoni na ukuba ingenzeki kwabanye abantu abakhathalayo.
Kwimeko echaseneyo, obunye bobuthathaka babo kukuba bahlala beqinile ngaphambili, sicebisa ukuba uqiniseke ukuba umhlaza wakho wamaphupha woyisile umntu wakho wakudala okanye naliphi na ithuba elibuhlungu elidlulileyo, ngaphambi kokufuna ukuqala into naye, mncede ulibale amava akho adlulileyo kwaye ujonge kwikamva.
Bonisa ukuba uyakuxabisa ukunyaniseka nokuba nesisa kwabo.
Iingcebiso ngemisebenzi kunye nezipho
Siza kukubonisa uthotho lwemisebenzi onokuyisebenzisa woyise umhlaza wamadoda, indlela esebenzayo yokulukuhla inkwenkwe yakho kukuthandana naye ekhitshini, olu phawu luhlala luthanda ikhitshi, ke zama ukumenzela iiresiphi ezimnandi kwaye ummemele kwisidlo sothando esenziwe ekhaya, uya kuyithanda.
Bangabantu abanesidima kakhulu, yonke into onokucinga ukuba ungayenza ngaphakathi ekhaya, ngaphandle kwamathandabuzo baya kuyonwabela, bazame ukwenza iimuvi ekhaya, bahlangane badlale imidlalo yevidiyo, badanise kunye, incoko elula okanye bathathe isandla sabo kwaye ubenze bazive ukuba ulapho naye kwaye aniyi kuhamba.
Njalo mkhuthaze ukuba azalisekise amaphupha akhe kunye neenjongo zakhe, abe nomdla kwesi sifundo, ubuze yonke into ngayo kwaye uhambe naye kwinqanaba lakhe ngalinye, uya kuwuxabisa kwaye loo nto ingamenza acinge ukuba yile nto ebeyifuna kakhulu.
Ngokubhekisele kwizipho, ngabantu abalula kakhulu abayixabisayo yonke into enxulumene nobugcisa, umculo kunye noncwadi, gcina oku engqondweni xa ufuna ukubathumelela iinkcukacha ezimangazayo.
Iimpawu zomhlaza kufuneka zihlale zizama ukuba kubudlelwane kunye
Kukho uluhlu lweempawu ezintathu zomhlaza ekufuneka uzame ukuba nobudlelwane nazo, zezi:
I-Taurus: Kungenxa yokuba lo mqondiso uya kudlulisa ukhuseleko kunye nokuzithemba ukubeka ecaleni elidlulileyo kwaye uqhubeke phambili.
IScorpio: Batyekele ekuqondaneni kakuhle, bazele ngamandla kwaye baya kuzinika iintliziyo zabo ngokupheleleyo.
Iintlanzi: Oku kudlulisa uxolo kuwe kwaye kuya kukunceda ukonwabele yonke imizuzwana yobomi bakho.
Ukuba uphawu lwakho aluveli kolu luhlu, ungalahli ithemba, usenethuba lokoyisa inkwenkwe enomhlaza, landela nje lonke icebiso lethu, funda kakuhle onke amaqhinga esikunika wona kwaye ulungiselele ukuphuma okugqibeleleyo okuya kumshiya umangalisiwe nawe.
Siyakumema ukuba uqhubeke nokufunda malunga ne ukuhambelana komhlaza kunye neminye imiqondiso ukuze ufumane ukuba angakanani amathuba akho.